रोचक चिसो बढ्यो!! रक्सी पिउने गर्नुहुन्छ ? सावधान ! चिसोमा यसरी रक्सी पिउँदा ज्यानै जान्छ, सेयर गरौं
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौ: चिसोयाममा मदिरा सेवनपछि खुला स्थानमा ढलेर मृ’त्यु हुने बढेका छन् । चिकित्सकका अनुसार त्यसरी ढलेका व्यक्तिमा हाइपोथर्मिया (शीतांग) हुने गरेको छ ।
चिसो लाग्दा मुटुको चाल बढ्छ । विभिन्न अंगका मांसपेशीले आफूलाई न्यानो राख्न ऊर्जालाई बाहिर निकाल्न थाल्छन् । यस्तो बेला रगत प्रवाह पनि कम हुन्छ ।
खुट्टा र हत्केलामा चिसो अनुभूति हुन्छ । मद्यपानका कारण हात र खुट्टाका रक्तनली फैलिन थाल्छन् । र, रक्सी सेवन गरेकाहरूलाई हातखुट्टा तात्दै गएको भ्रम हुने गर्छ ।